Kedu teknụzụ ndị C-Level Marketers na-etinye na? | Martech Zone
Black Ink mere a C-larịị 2016 Marketing ọmụmụ, Na-enyocha ndị na-ere ahịa site na ụlọ ọrụ kachasị elu 2000 kachasị elu na United States site na ego ha na-enweta kwa afọ yana mmefu ego nke $ 5 ijeri ọrụ na ụgwọ.
Budata Black Ink's C-level 2016 Marketing Survey
Ihe omumu nke ihe omumu nke Black Ink
Ihe ndị ahịa ga-ebute ụzọ bụ ịkwalite mkpa dị iche iche na ịbawanye ahịa nke ga-achọ mmelite dị egwu maka akụrụngwa Teknụzụ na ikike ọwa niile.
Nweta advanced nchịkọta ime mkpebi ka amamihe”Bụ otu ihe mgbochi kasịnụ iji nweta ihe ịga nke ọma gafee ọkwa ahụ.
Relationshiplọ mmekọrịta dị n'etiti / Intra-ngalaba dị mkpa maka ọganiihu n'ọdịnihu, n'agbanyeghị na eleghara ya anya dị ka ihe kacha mkpa na 2016.
N'ozuzu, ndị na-ere ahịa ga-ahọrọ karịa itinye ego na njide ndị ahịa na mbọ na-agba ume, kama inweta ndị ahịa.
Ndị na-ere ahịa nwere obi ike na ị ga-enwe ihe ịga nke ọma n'ịgha agha na-aga nke ọma mana ha na-agbasi mbọ ike ịnye onyinye ntinye ego nke azụmaahịa na ụlọ ọrụ C na njikwa elu.
Top 3 Martech edemede nwere ike zụta na 2016 bụ Ndị isi ahia ego, Ahịa ahia, na Mmekọrịta Ndị Ahịa ngwanrọ ngwanrọ.
Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị m na ndị na-ere ahịa abatala na akụkụ niile nke ahụmịhe ndị ahịa na-emetụta njigide, mana ha anaghị arụ ọrụ iji dozie ọdịiche ahụ na ngalaba ndị ọzọ. Amaghị m otu ị ga - esi meziwanye mbọ gị na mbọ ijide na - ejikọghị ahịa gị, ngwaahịa, ọrụ, yana ngalaba njikwa gị aka n'otu ụbọchị na afọ ebe aha gị bụ ọhaneze ma nwee ike ịnweta mmadụ niile n'ịntanetị. ihe mgbochi iji nwee ihe ịga nke ọma na ngwa ọrụ, akụrụngwa, na onye ndu bụ nke akọwara na nsonaazụ ya… mana kedu ka ị ga - esi melite ndị ahụ na - enweghị agwa ụdị ahịa ahụ ma hụ na ọ ga - agara nke ọma n'ofe ndị mmadụ
Site na ngwa ọrụ, Teknụzụ Azụmaahịa bụ mkpokọta gbawara ọtụtụ puku azịza. Ndị buru ibu dị ka Salesforce, Microsoft, Oracle, SAP na Adobe na-aga n'ihu na-azụta obere nyiwe nke na-edozi niche okwu - mana enwere obere obi abụọ na nke a bụ ụlọ ọrụ mgbagwoju anya na ọtụtụ ngwaọrụ yana overlap. Enwere m mmetụta na enweghi nnukwu ndaghari n'ahịa ahịa n'etiti ụlọ ọrụ ndị a n'èzí ndị egwuregwu ahụ.
Black Ink ROI's C-level 2016 Marketing Study na-egosipụta ụfọdụ nke izugbe, usoro mgbasa ozi zuru oke na-emetụta ụlọ ọrụ ndị a zuru ụwa ọnụ, kamakwa ụfọdụ nuances dị iche n'etiti ọdịnala ụlọ ọrụ, mmasị ego, nsogbu na ohere.
Anyị na ụfọdụ ụlọ ọrụ buru ibu na-arụ ọrụ yana obere mmalite na echeghị m na echiche ahụ dị iche n'etiti ha. Na mpụga mmefu ego na akụrụngwa, azụmaahịa pere mpe na nke ọkara ka na-achọ ịkọ akụkọ ka mma, akpaaka iji bulie akụrụngwa, yana mmemme iji nwekwuo ahụmịhe ndị ahịa. Ma ọ dịkarịa ala, anyị niile nwere nke ahụ!
Banyere Black Ink ROI
Black Ink ROI dabeere na SaaS, ikpo okwu ndị ahịa-nyocha maka ahịa, ahịa na ndị isi P&L iji melite nnweta ndị ahịa, njigide na iwalite ohere uto.
Tags: adobeAnalyticsnwa ink roiika mkpaọgụgụ isi azụmahịammekọrịta ndị ahịaahịa-centricityakụrụngwa ahịateknụzụ ahịamicrosoftomni-ọwaOraclendị ahịa
Mmetụta Goga Global na Mobile Mobile Gị